कोरोना युद्धः व्यवस्थापनमा कहाँ चुक्यो सरकार ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण बिरुद्ध आज संसार युद्धरत छ । कोरोनाले संसारभर ६ लाख भन्दा बढीलाई आक्रमण गरेको र २७ हजार ३ सय बढीको ज्यान लिइसकेको छ । नेपालमा ४ जना
उर्लाबारीका मेयर जनप्रतिनिधि हुन् कि, गुण्डा ?
उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्ग फागोले बुधबार उर्लाबारी चोकमा दर्जानौं सर्वसाधारणमाथि लाठी वर्षाए । मेयर फागोले पैदल यात्री, साइकल, मोटरसाइकल, अटो र कारमा आएका व्यक्तिलाई लाठैलाठाले हाने । त्यसरी यात्रा गर्नेले
झापा विद्रोहको त्यो इतिहास
‘सामन्तलाई नगिँडे सैनिकसँग नभिँडे, आउँदैन जनवाद झोली थापेर’ झापा विद्रोहमा यही गीत गाउँदै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट योद्धाहरुले सामन्ती राज्यसत्ताविरुद्ध विद्रोहको घोषणा गरेका थिए । झापा विद्रोहमा सामन्त विरुद्ध गरिब किसानलाई गोलबद्ध
नेपालमा युवा ४०.३ प्रतिशत, भूमिका शुन्य !
युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहन शक्ति हुन । साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो
सेल्फी क्रेज: वैंश छचल्क्याउने माध्यम !
‘फेसबुक’ संसारमा सबैधन्दा धेरै प्रयोग हुने सामाजिक सञ्जाल हो । फेसबुकलाई मानिसले व्यक्तिगत रुपमा मात्र नभई आफ्नो संस्थागत, व्यापारलगायतको प्रचारप्रसार गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिरहेका छन् । लाखौँ व्यक्तिले
मानवशास्त्री बिष्टको गिदी हल्लाउने ‘भाग्यवाद र विकास’
‘नेपाली समाजको संरचनात्मक ढाँचालाई बदल्ने प्रयास नभएका होइनन् । तर ती प्रयासहरु आफै पछि गएर नेपाली समाजको परिवर्तनको मार्गमा बाधाका रुपमा उपस्थित हुने देखिन्छ । किनभने यी परिवर्तनहरु नेपाली समाजको
कार्ल माक्र्सको ‘पत्रकारिता’
कार्ल माक्र्स माक्र्सवादी दर्शनका प्रणेता हुन् । वैज्ञानिक सम्यवाद विचारका प्रवर्तक माक्र्स प्रतिभाशाली विद्यार्थी थिए । कानुनमा स्नातक गरेका माक्र्स दर्शन र इतिहासको गहिरो अध्ययन गरेका थिए । उनले जर्मनको
प्रेमको उत्सव ‘भ्यालेन्टाइन डे’
नबिना (निर्मला) कुईकेल । ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात प्रणय दिवस, माया गर्ने जोडीको लागि विशेष दिन । आजको दिन मन परेको मान्छेलाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने, प्रेममा रहेकाले एक अर्कामा प्रेम भाव
सोसल मिडियाले रेडियोमा ल्याएको संकट
आज विश्व रेडियो दिवस । रेडियो नियमित प्रसारण भएको आज एक शताब्दी पूरा भएको छ । रेडियो शब्दको प्रयोग फ्रान्सका भौतिकशास्त्री इडौवार्ड ब्रान्लीले सन् १८९७ मा प्रयोग गरेपनि सन् १९२०
नेपाली मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई गर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्र्तगतको सहयोगका सन्दर्भमा चर्चा र बहस चुलिएको छ । एमसीसी मार्फत आउने ५५ अर्ब नेपालले लिनु हुन्छ,